शसस्त्रद्धन्दकालमा विस्थापित बैंक शाखा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीः सबैलाई पुनःस्थापित गरिन्छ — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > शसस्त्रद्धन्दकालमा विस्थापित बैंक शाखा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीः सबैलाई पुनःस्थापित गरिन्छ
शसस्त्रद्धन्दकालमा विस्थापित बैंक शाखा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीः सबैलाई पुनःस्थापित गरिन्छ
बागलुङ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले नेपाल बैंक लिमिटेड, गलकोट शाखाको उद्घाटन गरे । सशस्त्रद्वन्द्वमा विस्थापन भएपछि सो शाखा हालै मात्र पुनःस्थापना भएको हो ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री महाराले मुलकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीणमुखी हुनपर्नेमा जोड दिए । नागरिकको घर–घरमा बैंकिङ सेवा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नागरिकको जीवनस्तर उकास्नतिर बैंक केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री महाराले ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था महत्वपूर्ण आधार हुन्’ भन्दै विगतको द्वन्द्वले बन्द हुन पुगेका सबै वित्तीय संस्थालाई पुनःस्थापना गरिने स्पष्ट पारे ।
संसद्को प्रक्रियामा छिरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा आउनसाथ मुलुकको विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकको आफ्नै पुरानो भवन जीर्ण भएकोले तत्कालका लागि भाडाको घरबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैंकले बचत सङ्कलन, कर्जा प्रवाह, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, विप्रेषण लगायतका सेवा प्रवाह गरिरहेको शाखा प्रबन्धक लक्ष्मण रखालले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त शाखाबाट गलकोट भेगका दर्जन भन्दाबढी गाविसले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् । २०३३ सालमा स्थापना भएको शाखा द्वन्द्वका कारण २०५८ सालमा विस्थापित भएका थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ १
२०७३ माघ १ गते १६:२८ मा प्रकाशित
न्यूनतम तापक्रम शून्यमा झर्यो, जाडो अझै बढ्ने !
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको तारेभीरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने
यी ९ नौ देश, जुन आपसमा युद्द भए संसार ध्वस्त हुन्छ
दसैँमा लगानीकर्तालाई कति लाभांश ? युनिलिभरको ७७०%, अन्यको कति ? (सूचिसहित)
गोली हान्नेलाई ११ लाख दिइने सार्वजनिक सूचना जारी
कलङ्की–चाबहिल सडक विस्तारको तयारी